'किशोरीको शत्रु जंक फुड'
२५ श्रावण २०७७ आइतबार Sunday, August 9, 2020
KATHMANDUTemperature 22°CAir Quality25
काठमाडौँ, भद्रवासकी बोनिता शर्मा, २८, बीबीसी विश्व सेवाको प्रभावशाली एक सय महिलाको सूचीमा अटाउन सफल भएकी छन् ।
७ कार्तिक २०७६ बिहीबार
काठमाडौँ, भद्रवासकी बोनिता शर्मा, २८, बीबीसी विश्व सेवाको प्रभावशाली एक सय महिलाको सूचीमा अटाउन सफल भएकी छन् । महिलाको स्वास्थ्यमा परिवर्तन गर्ने विचारसहित सोचाइ : युथ फर न्युट्रिसन संस्थाले गरेको कामको आधारमा उनलाई सूचीमा समेटिएको हो ।
तपाईंलाई प्रभावशाली महिलाको पंक्तिमा उभ्याउने तागत के हो ?
हामीले आमा र किशोरीहरुको समस्यालाई नयाँ ढंगले समाधान निकाल्ने खोज गरेका छौँ । यसमा रंगीबिरंगी मालाका माध्यमबाट महिलाका स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याको समाधान खोजेका छौँ ।
यसको प्रभाव गज्जबै छ त ?
हामीले मालामार्फत आमाहरुलाई ज्ञान दियौँ । यति सानो विचारले तिनमा पोषणसम्बन्धी ज्ञानमा नसोचेको परिवर्तन आयो । किशोरीहरुमा पनि महिनावारीसम्बन्धी ठूलो समस्या छ ।
त्यसको कारण ?
किशोरकिशोरीको स्वास्थ्यको ठूलो शत्रु जंक फुड हुन् । हामी जति पनि स्कुलमा गयौँ, त्यहाँ जंक फुडको महामारी पाइयो । चाउचाउ, चटपटे, कोकजस्ता अस्वस्थ तयारी खानाले हाम्रो भविष्य रोगी बनाइरहेको छ ।
सबै जंक फुड हानिकारक हुन्छन् ?
जंक फुड खाँदा पेट भरिएजस्तो हुन्छ तर शरीर भोकै हुन्छ किनभने त्यसमा शारीरिक विकासका लागि आवश्यक पोषण तफ्व पाइँदैन । ती खानेकुरा कमसल कच्चा पदार्थद्वारा उत्पादित हुन्छन् । किशोरावस्थामा यसको असर नदेखिए पनि पछि मधुमेह, मोटोपना, मुटु रोगजस्ता समस्या आउँछन् ।
जंक फुडको महामारीमा सरकारी नीतिको खोट देखिँदैन ?
सरकारले विद्यालयहरुमा यस्ता खानेकुरामा प्रतिबन्ध लगाएको छ । तर हामी गएका धेरै विद्यालयमा बच्चाहरुले चाउचाउ नै खाइरहेका थिए । किशोरीलाई आइरन चक्की दिने सरकारी नीति छ, पाएका छैनन् । सेलिबि्रटीहरुले जंक फुड प्रवर्द्धन गरेकाले पनि धेरैले यस्ता खानेकुरा खाइरहेका छन् ।
जंक फुड रोक्ने उपाय के त ?
गाउँमा स्थानीय खान्कीको महत्त्व नबुझ्दा र सहरमा अधिक जंक फुडले कुपोषण बढिरहेको छ । यसबारे अभिभावक, शिक्षक, विद्यार्थीलाई ज्ञान दिने अभियान चलाउनुपर्छ ।
‘कोरोनाले सबै क्षेत्र भत्किएपछि कृषिमा मात्रै सम्भावना देखेका छौँ’ (कृषि तथा पशुपन्छी विका...
'तीन वर्षपछाडि नेपालको कृषि व्यवस्था नयाँ स्वरूपमा आउनेछ'
सम्हाल्न नसक्ने स्थितिमा पुग्यौँ । प्रदेश र संघीय सरकारलाई भनिरहेका छौँ तर हाम्रो कुरा सुन...
‘विशेष स्वास्थ्य टोली नपठाए नरैनापुरको स्थिति नियन्त्रणबाहिर'
यो सबै पदको झगडा हो । नेताहरूमा धैर्य छैन । महाधिवेशन र अर्को चुनाव पर्खिन नसक्नेले जनताला...
'महाधिवेशनबाट ओली र प्रचण्डलाई बिदा गर्नुपर्छ'
जसलाई एजेन्डा तयार गर्न जिम्मा दिइएको हो, उसलै तयार नगरेपछि ओलीलाई किन दोष ? - सत्यनारायण ...
‘त्यसो भए नेकपा नै विघटन गरिदिऊँ’
सचिवालयको संरचनाको औचित्य नै भएन । अब सचिवालय विघटन गरेर स्थायी समितिमै सबै विषय छलफल गर्न...
‘नेकपाको सचिवालय विघटन गरौँ’
सबैभन्दा कम कमजोरी भएको नेता छान्ने हो भने माधव नेपाल हो । माधव नेपालमा मान्छे समातेर राख्...